Kooxdii Masaajidka Xaramka Ka Xadday Dhagaxa Madaw Ee Xajarul Aswadka Iyo Tirada Sannadaha Ay La Maqnaayeen | Foore News
Home Warar Kooxdii Masaajidka Xaramka Ka Xadday Dhagaxa Madaw Ee Xajarul Aswadka Iyo...
Kooxdii Masaajidka Xaramka Ka Xadday Dhagaxa Madaw Ee Xajarul Aswadka Iyo Tirada Sannadaha Ay La Maqnaayeen
Qaraamidadu waa koox habaarqabtay oo kamida kooxaha shiicada Ismaaciliyiinta, kuwaasoo xasuuq fool xun u gaystay dad badan oo muslimiina oo gudanaya waajibaadka xajka, waxayna dhaceen dhagaxa madow ee kacbada ayagoo la maqnaa mudo laba iyo labaatan sanadooda.
Imaamu Ibnu Kathiir, Ilaahay ha unaxriistee isagoo ka warramaya Qaraamidada wuxuu ku sheegay kitaabkiisa Al-bidaayah wa-alnihaayah: Sanadku markuu ahaa 317 kii hijriyada waxa soo baxay Abu Daahir Al-Qurmudi iyo ciidankiisii, waxay yimaadeen magaalada Makkah. Maalintii 8aad ee bisha Dulxaj oo loo yaqaano maalinta Tarwiyada oo xujaajtii ay gudanayaan waajibaadkii xajka ayuu weerar ku qaaday, wuxuuna laayey xujaajtii isagoo aan u aabo yeelin.
Habaarqabe Abu Daahir wuxuu fadhiistay albaabka kacbada, isagoo hareerihiisa lagu gawracayo dad muslimiina oo aan waxba galabsan, wuxuuna lahaa:
”Aniga ayaa Ilaah ah, Ilaahna waa aniga wuxuu abuuraa khalqiga aniguna waan madhiyaa”
Dadkiina waxay cabsidii ku dhageen daaha kacbada, arrintaasina waxba umay tarin ee meeshii lagu qabtaba waa lagu dilayey. Kadibna habaarqabihii Qurmudi wuxuu faray ciidankiisii in maydadka lagu guro ceelka Zamzamka, dad badan oo kalena halkii ay ku naf baxeen ayaa lagu aasay. Kadibna wuxuu dumiyey barandadii ceelkii Zamzamka, waxa kale oo uu faray in lasoo rujiyo albaabka kacbada, wuxuuna ka siibay daaheedii, waanu jeexjeexay wuxuuna u qaybiyey ciidankiisii.
Kadibna nin ayuu faray inuu soo rujiyo mijiroorka kacbada, hase ahaatee dhulka ayuu kusoo dhacay waanu dhintay.
Kadibna wuxuu faray in lasoo saaro dhagaxa madax ee Xajaru Al-aswadka, dabadeedna nin ayaa dhagixii soo fujiyey isagoo leh: ”Meeye shinbirihii kooxaha ahaa, meeday dhagxaantii kululayd”
Abu Daahir Al-Qurmudi iyo ciidankiisii waxay qaateen dhagaxii madoobaa iyo xoolihii ay ka dhaceen xujaajtii gudanaysay waajibaaka xajka. Habaarqabahani wuxuu ku xadgudbay bishii xurmaysnayd, dhulkii xurmaysnaa iyo dhiig xurmaysan.
Markuu laabtay waxa ka daba tagay amiirkii magaalada Makkah isagoo bixiyey xoolihiisii oo dhan si uu dhagaxa meeshiisii ugu celiyo balse wuu diiday kadibna amiirkii wuu la dagaalamay, waana la jabiyey ciidankii amiirka, waana la dilay isaga iyo qaar badan oo ciidankiisa kamida.
Habaarqabihii sidaas ayuu ku qaatay dhagixii madoobaa, wuxuuna la maqnaa 22 sanadood.
Xilliga ay boobka iyo xadgudubka ku sameeyeen magaalada Makkah waxay ahayd mawsimkii Xajka, lamana filayn in dad sidaas wuxuush u ah ay ku xadugubayaan masaajidka xurmaysan, sidoo kale waxay ahayd xilli dawlada Cabbaasiyiintu ay ku jirto qalalaanse siyaasadeed iyo madaxtinimada oo la isku haystay. Sanadkii 339 kii hijriyada ayay Qaraamidadu soo celiyeen dhagixii madoobaa, kadib markay haysteen laba iyo labaatan sanadood. Dad badan ayaa isku dayey inay kasoo celiyeen dhagaxa madaw, balse way diideen ayagoo dhahaya: ”amar baan ku qaadanay, amarna waan kusoo celinaynaa”
Qaraamidadu maxay yihiin? Maxayse rumaysanyihiin?
Qaraamidadu waa koox kamida shiicada Ismaaciiliyada kuwaasoo imaam ka dhigtay Ismaaciil binu Jacfar, waxayna rumaysanyihiin in Maxamed binu Ismaaciil yahay mahdigooda. Qaraamidada iyo Faadimiyiintuba waxay labadooduba ka tirsanyihiin shiicada Ismaaciiliyiinta. Waxa kale oo loogu yeedhaa baadiniyiin, sababtoo ah waxay rumaysanyihii in quraanku leeyahay fasir muuqda iyo fasir qarsoon. Fasirka muuqda waxa yaqaana doqomada oo kaliya, halka fasirka qarsoon ay yaqaanaan dadka caqliga leh uun.
Previous articleTaliyaha Booliiska Oo Beeniyey Warar Lagu Sheegay In Ciidanku Qabteen Rag Laga Shakiyay Iyo Hub
Next articleLyudmila Pavlichenko: Marwadii Dhimashada | Mid Ka Mid Ah Haweenka Ku Xardhan Bogaga Taariikhda Dagaalkii Labaad